Homeसमाचारतेस्रो बिहे नगर भन्ने प्रश्न गरेपछि, के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो भन्दै अभिनेत्री श्वेता तिवारी रि’साइन्
April 3, 2021 admin समाचार 5467
‘कसौटी जिन्दगीकी’बाट प्रेर’णाको भूमिकामा चर्चा कमाएकी टेलिभिजन अभिनेत्री श्वेता तिवारीले आफ्ना दुई अस’फल वैवाहिक सम्बन्धका तीता अनुभव साटेकी छन्। इन्डियन एक्सप्रेसका अनु’सार श्वेताले आफूले श्रीमानबाट घरे’लु हिं ‘सा ख’प्नु परेकोले दुई वटा वैवाहिक स’म्बन्ध टिकाउन नस’केको बताएकी हुन्।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै उतार चढाव भो’गेकी श्वेताको किशोरावस्थामा राजा चौधरीसँग विवा’ह भएको थियो। २७ वर्षको उमेरमा उनले घरेलु हिं’ ‘साको आ’रोप लगाएर राजासँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। सन् २०१३ मा उनले अभिनव कोहलीसँग विवाह गरेकी उनको दोस्रो वि’वाह पनि टिकेन।
आफ्ना दुई वटा सम्ब’न्धबारे बोल्दै उनले पहिलो विवाहमा उनको घ रेलु हिं’ साको शि’का’र भएको बताएकी हुन्। उनले घरेलु हिं’सा भो’ग्नुप’र्दा पनि महिलालाई समाजले यस्ता घट’नालाई सामान्य रुपमा लिएर वैवाहिक सम्बन्ध जो’गाओस् भन्ने चाहेको बताइन्।
उनको पहिलो विवाहबाट छोरी र दोस्रो छोरा छन्। ‘मध्यमवर्गीय परिवारमा, बाल्यावस्थादेखि नै सम्झौता र समा’योजन गर्न भनियो। समाजले तपाईंलाई एक दुई थप्पड केही होइन भन्छ। तर मेरी आमाले त्यस्तो कहिले पनि भन्नुभएन,’ उनले भनिन्। उनले यस्तो अवस्थामा महिलाले बच्चाको भ’विष्यबारे सोच्न दबाब दिनेसमेत बताइन्।
‘तर जब मैले २७ वर्षको उमेरमा पहिलो श्रीमान छो:डेँ, बच्चाका अगाडि आमा-बुवाले दिनहुँ झ’गडा गर्नु वा उनीहरुले बुवालाई मा’तेको देख्नु एक्लो आमा वा बुबासँग हु’र्काउनु भन्दा न’राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन्। श्वेताले अनुभव सुनाइन्, ‘तपाईं विवाहपछि १० वर्ष सँगै बसेर छुट्टिनु भयो भने कसैले प्रश्न गर्दैनन्। तर तपाईं दुई वर्षमै अलग हुनु&भयो भने सबैले भन्छन् कति चोटी बिहे गर्छौ?’
श्वेताका अनुसार दुई पटक सम्बन्ध अस’फल भइसकेकोले मानिसहरु उनलाई सल्लाह दिन आउँछन् र भन्छन्, ‘तेस्रो बिहे नगर।’ उनको प्रश्न छ, ‘म उनीहरूलाई सोध्छु, को हुन उनीहरु? के मेरो बिहे खर्च उनीहरु’ले तिर्नुपर्ने हो? यो मेरो निर्णय हो। यो मेरो जीवन हो।’ इताजा खबरबाट
March 1, 2021 admin समाचार 6027
चलचित्रप्रेमी नेपाली दर्श’कहरुमाझ प्रमुख आकर्षणको रुपमा रहेको जयने’पाल फिल्म हल बन्द भएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले २० वर्ष पुरानो जय’नेपाल फिल्म हल सधैंका लागि बन्द गरेको हो । क्वेस्ट इन्ट’रटेनमेन्ट प्रमुख
October 5, 2020 admin समाचार 11690
दक्षिण कोरियामा कार्यरत एक नेपालीले आईतवार विहान आ’त्म ह’त्या गरेका छन् । स्याङजा जिल्ला मालुंगा घर भई कोरियाको छुङछङबोक्दोमा विगत १० वर्ष देखि साम’सङ क्षेत्रमा बंगुर फार्ममा कार्यरत यज्ञ प्रसाद बस्यालले आफु काम गर्दै आएको
January 18, 2021 admin समाचार 6761